Dowladda oo AU u gudbineysa dacwad ka dhan ah duqeynta Kenya | KEYDMEDIA ONLINE
Dowladda oo AU u gudbineysa dacwad ka dhan ah duqeynta Kenya
Dowladda Soomaaliya ayaa si aada u cambaareysay duqeyntii diyaaradaha Kenya ay ka geysteen Soomaaliya kuwaasoo dad badan lagu laayay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dowladda Soomaaliya ayaa si adag u cambaareysay duqeymihii diyaaradaha Kenya Khamiistii shalay ka geysteen deegaano ka tirsan gobolka Gedo, taas oo dad shacab ah oo haween iyo caruur ku jirto dhimasho iyo dhaawac ka soo gaaray.
Dowladda ayaa sheegtay in duqeymahaasi ay ahaayeen kuwo aan loo meel dayin oo dad shacab ah lagu beegsaday, waxaana duqeymuhu ay ka dheceen deegaanada Ceel Cadde iyo Hisa-u-gur ee Gobolka Gedo, iyadoo dowladda Soomaaliya ay ku hanjabtay inay dacwad u gudbin doonto Midowga Afrika.
Diyaarad aan duuliye lahayn oo laga leeyahay Kenya ayaa Khamiistii saqdii dhexe duqeyn ka geysatay gobolka Gedo.
Inta la xaqiijiyay waxaa duqeyntaas ku dhaawacmay shan caruur ah iyadoona ay dhimatay hooyadii dhashay caruurtaas.
Cali Axmed Sheekh Cabdi oo ah aabaha qoyska musiibadu ku habsatay, ayaa warbaahinta u xaqiijiyay qasaaraha soo gaaray reerkiisa iyo sida wax u dhaceen.
Sida warar madax bannan ay Keydmedia Online u xaqiijinayaan waxaa jira degaanno kale oo ku yaalla Gedo oo diyaaradaha Kenya ay duqaymo ka geysteen, kuwaas oo qudhoodu uu ka jiro qasaaro soo gaaray shacab xoolo dhaqto u badan.
Ceel-cadde degaan ahaan waxa ay dhacdaa bartamaha gobalka Gedo dhul daaqsimeedka joogiisa sareeyo, waxa ayna dhanka galbeed 60 KM kaga beegantahay magaala madaxda gobalka ee Garbahaareey.
Halkan hoose ka akhriso faafinta rasmiga ah: